Muuqaal :"- Fircoon Cusub Oo Lagu Arkay Masar, Wuxuu Cunaa Dhalooyinka Sidoo kalan Baabuurta Ayuu Afkiisa Ku Jidaa - Hablaha Media Network
Muuqaal :"- Fircoon Cusub Oo Lagu Arkay Masar, Wuxuu Cunaa Dhalooyinka Sidoo kalan Baabuurta Ayuu Afkiisa Ku Jidaa
HMN:- Karim Xuseen Waa mid kamid ah dadka dagan caasimadda Masar ee Qaahira, wuxuu leeyahay Jimicsi jireed, wuxuuna leeyahay sifooyin awood badan.
Ninkaan ayaa dareemo kibir badan iyo Isla Weynin markii ay saaxiibadooda iyo ehelkiisa ugu yeeraan (Fircoon) kadib markii uu baabuur afkiisa ku jiiday, sidoo kalana uu cunay masaamiir iyo dhalooyin lasoo jajabiyey.
Xuseen ayaa dad badan hortooda kusoo bandhigay xirfadda qaaska u ah, ninkaan ayaa miis alwaax ka sameysan oo xoog leh ku qaaday ilkihiisa, sidoo kalana wuxuu cunay Hilib ceyriin ah.
Ninkaan ayaa la sheegay inuu leeyahay awood Biological ah oo naadir ah taasoo lagu arkay ilaa yaraantiisa.
” Waxaan bilaabay shaqadaan markii aan ahay 7 ilaa 8 jir, waxaan cabi jiray koob caano ah, masaamiir, makiinadaha tinta lagu jarto, taasna waxay keentay in waalidkeyga ay dhaqaatiir uu geeyaan, sidoo kalana waxaan awoodaa inaan cuno dhalooyinka iyo macdanka” Ayuu yiri ninkaan.
Sidoo kale wuxuu sheegay in ilmihiisa ay awoodaan oo kale leeyihiin iyagoo dadka hortooda kusoo badhigay waxyaabo lala yaabay.
Haddaba muuqaalkaan hoose ayaa ka daawan kartaa ninkaan kibirka badan ee dadkiisa ugu yeereen magaca fircoonka cusub